Iipropati zeMhlaba - i-Lanthanide kunye ne-Properinide Properties
Lanthanides kunye ne-Actinides
Kukho umhlaba-Izinto ezisezantsi kwiTable Table
Xa ukhangele iThebula lePeriodic , kukho ibloko lemiqolo emibini yezinto eziphantsi kweqela eliphambili letshathi. Ezi zinto, kunye ne-lanthanum (isicatshulwa 57) kunye ne-actinium (isigaba 89), ziyaziwa ngokubanzi njengezinto ezinqabileyo zomhlaba okanye izitya zehlabathi ezingaqhelekanga. Enyanisweni, azinalo iinqabileyo, kodwa ngaphambi kowe-1945, iinkqubo ezide kunye nezixakekayo zazifuneka ukuba zihlambulule izinyithi kwii-oxydes zazo.
Inkqubo yokutshintshiselwa kwe-Ion kunye neenkqubo zokukhutshwa kweso solvent zisetyenziswe namhlanje ukukhawuleza ukuvelisa umhlaba onqabileyo, ongezantsi, kodwa igama elidala lisasetyenziswa. Izityebi ezinqabileyo zomhlaba zitholakala kwiqela le-3 letafile yexesha, kunye ne-6 (5 d ukucwangciswa kwekhompyutha ) kunye ne-7 (5 f ye- electronic configuration ). Kukho iingxabano zokuqala i-3rd and 4th series series with lutetium kunye nomthetho kunokuba i-lanthanum kunye ne-actinium.
Kukho iibhloko ezimbini zehlabathi ezingabonakaliyo, uchungechunge lwe-lanthanide kunye noluhlu lwe-actinide. I-lanthanum kunye ne-actinium zombini zikhona kwiqela IIIB yetafile. Xa ukhangela itafile yexesha, qaphela ukuba amanani e-athomu enza i-lanthanum (57) ibe yi-hafnium (72) kunye ne-actinium (89) kwi-rutherfordium (104). Ukuba unqabana ukuya ngasezantsi kwetafile, unokulandela amanani e-athomu ukusuka ku-lanthanum ukuya kwi-cerium kunye ne-actinium ukuya kwi-thorium, kwaye emva koko uphindele kwiqela eliphambili letafile.
Amanye amakhemikhali awabandakanyi i-lanthanum kunye ne-actinium kwihlabathi elingabonakaliyo, ecinga ukuba i-lanthanides iqalise ukulandela i- lanthanum kunye ne-actinides ukuqala ukulandela i- actinium. Ngendlela, ihlabathi elingabonakaliyo litshintshi ekhethileyo , eneeninzi zeepropati zezi zinto.
Iimpawu eziqhelekileyo zoMhlaba oPhezulu
Ezi zakhiwo eziqhelekileyo zisebenza kwii-lanthanides kunye nama-actinides.
Imihlaba engabonakaliyo isilivere, i-silvery-white, okanye igrey.
Isinyithi sinomsila ophezulu, kodwa sidibanisa ngokukhawuleza emoyeni.
Izinyithi zinomgangatho ophezulu wokuqhuba umbane.
Ihlabathi elincinane lingabelana ngeendawo ezininzi eziqhelekileyo. Oku kwenza kube nzima ukuhlukana okanye ukuhlukanisa omnye nomnye.
Kukho ulwahlulo oluncinci kwi-solubility kunye nolwakhiwo oluyinkimbinkimbi phakathi kwehlabathi elingabonakaliyo.
Izityambo ezinqabileyo zomhlaba zenzeke ngokufanayo kwimigodi (umz., I-monazite yinto edibeneyo ye-phosphate yomhlaba).
Ihlabathi eliqhelekileyo lifunyenwe ngaphandle kwezinyithi, ngokuqhelekileyo kwi-3+ ye-oxidation state. Kukho ukuthambekela okuncinci ukuhlula i- valence . (I-Europium inayo i-valence ye-2+ kunye ne-cerium nayo i-valence ye-4+.)
Metalloids okanye i-Semimetals
Uphi umehluko phakathi kweCarbon-12 neCarbon-14?
Faka iNyunithi Yakho Yokuthumela I-Tank